Ogaden News Agency (ONA) – Midowga Yurub oo Ogolaaday Qorshaha ka Bixida Britain.
Midowga Yurub oo Ogolaaday Qorshaha ka Bixida Britain.
Posted by ONA Admin	/ November 27, 2018
Madaxda 27-ka waddan ee Midowga Yurub (EU) ayaa ansixiyey heshiis ay dalka Biritan kaga baxayso Midowgaasi, isla markaana u gogol-xaadhaya nooca iskaashiga ay mustaqbalka yeeelan doonaan labada dhinac.
Heshiiskan ayaa cayimaya waqtiga ay Britain ka baxayso oo ah 29-ka bisha March iyo waliba hanaanka xidhiidhka mustaqbal ee ay yeelan doonaan labada dhinac. Raysal wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa hada waajahaysa shaqo adag oo ah inay heshiiska ka dhaadhiciso baarlamaanka midowga Britain oo aan la malayn Karin.
Sidoo kale madaxweynaha golaha Midowga Yurub Donald Tusk iyo raysal wasaaraha dalka Spain Pedro Sanchez ay isla meel dhigeen xalka mustaqbalka Gibraltar oo ah dhul ku yaala xeebta koonfureed ee dalka Spain, arintaasi oo meesha ka saartay caqabadii hortaalay kulanka midowga Yurub uu ka yeelanayay si uu u taageero qorshaha ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub.